जर्मनी र अर्जेन्टिनाको लडाई हुने/गोल्डेन बुट पाउने गोन्जालोको सम्भावना बढ्दै | Home
जर्मनी र अर्जेन्टिनाको लडाई हुने/गोल्डेन बुट पाउने गोन्जालोको सम्भावना बढ्दै
Posted on June 28, 2010 by Yonepal	विश्वकप फुटलब २०१० को क्वाटर फाइनलमा जर्मनी र अर्जेन्टिना पनि पुगेका छन्। जर्मन इंग्ल्याण्डलाई ४-१ हराउँदै क्वाटर फाइनल प्रवेश गर्‍यो भने अर्जेन्टिना ३-१ ले मेक्सिकोलाई हराउँदै क्वाटर फाइनल यात्रा तय गर्‍यो। यी दुवै खेलमा एक/एक गोलमा भने विवाद आएको थियो।
इंग्ल्याण्ड हराउँदै जर्मनी क्वाटर फाइनलमा
चार पटकको विश्वकप उपविजेता जर्मनी विश्वकप फुटबल २०१० को क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इंग्ल्याण्डलाई ४-१ ले हराउँदै जर्मनीले क्वाटर फाइनलको यात्रा तय गरेको हो।
दक्षिण अफ्रीकाको फ्री स्टेट स्टेडियममा भएको निकै रोमाञ्चक खेलमा जर्मनीले इंग्ल्याण्डका विरुद्ध चार गोल गर्‍यो। जर्मनीको लागि जर्सी नं. १३ नं.जर्सीका मिडफिल्डर थोमस मुलरले ६७ औं र ७० औं मिनेटमा गोलको योगदान दिए । उनले ७२ औं मिनेटमा मैदान छाडेका थिए । उनी नै म्यान अफ दी म्याच भएका थिए । यस्तै रातो कार्डपाए पछि एक खेल गुमाउन पुगेका जर्सी नं. ११ का फरवार्ड मिरोस्लाभ क्लोजले खेलको २० औं मिनेटमा गोल गरे । क्लोजको विश्वकपमा यो व्यक्तिगत १२ औं गोल हो। उनी पनि ७२ औं मिनेटमा मैदान बाहिरिएका थिए। त्यस्तै जर्मनीका लागि १० नं.जर्सीका फरवार्ड लुकास पोडोलोस्कीले ३२ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
इंग्ल्याण्डका विरुद्ध निकै सशक्त भएर प्रस्तु भएको जर्मनीले धेरै पटक गोलका लागि संघर्ष गरेको थियो। प्रत्युत्तरमा इंल्ग्याण्डले पनि राम्रै खेल्यो । जर्मनीले पेलिरहेकै अवस्थामा इंग्ल्याण्डका १५ नं.जर्सीका डिफेन्डर म्याथ्यु उपसनले खेलको ३७ औं मिनेटमा गोल गरे । त्यसको एक मिनेटपछि नै
फ्रान्क लाम्पार्डले गोल पोष्टमा सशक्त प्रहार गरे । उनले प्रहार गरेको बल माथिको बिममा लागेर मैदानबाट भित्र छिरेको थियो तर त्यो गोलले मान्यता पाएन । रेफ्री उरुग्वेका जोर्गी लारोन्डा थिए । लाम्पार्डले केही अरु पनि सशक्त प्रहार गरे तर सफल भएनन । जेराड, रोनी लगायतले पनि निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए ।
खेल अवधिभर दुवै टिमले एक एक पहेलो कार्ड पाए । क्वाटर फाइनल पुग्ने सपना जर्मनीले टुङ्ग्याइ दिएपछि इंग्ल्याण्डका फ्यानहरुमा नैरश्यता पैदा गरेको थियो।
अर्जेन्टिनाको यो विश्वकपमा चौथो जितसँगै क्वाटर फाइनल प्रवेश
विश्वकप २०१० को प्रबल दाबेदार राष्ट्र मानिएको अर्जेन्टिनाले आफ्नो विजयी यात्रालाई जारी राख्दै क्वाटर फाइनल प्रवेश गरेको छ। मेक्सिकोलाई ३-१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना क्वाटर फाइनल प्रवेश गरेको हो। यो विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले अहिलेसम्म हारेको वा बराबरी खेलेको छैन।
मेक्सिकोको अगाडि निकै आक्रमक रहेको अर्जेन्टिनाले यसअघि ग्रीससँग खेलाइएको खेलाडी भन्दा केही परिवर्तन गरेको थियो। मेक्सिकोसँगको खेलमा कार्लोस टेभेज, गोन्जालो हिगुइन जस्ता मैदान भित्र्याएको थियो।
सुरुबाटै आफ्नै आक्रमक प्रस्तुत देखाएको अर्जेन्टिनाले खेलको २६ औं मिनेटमा गोल गर्‍यो। लियोनल मेसीको पासमा हेडमार्फत जर्सी नं.११ का फरवार्ड कार्लोस टेभेजले गोल गरे । उनी अफसाइड पोजिसनमा थिए तर गोलले मान्यता पायो। चोटका कारण केही खेल गुमाउनु परेको टेभेजले पुनः ५२ औं मिनेटमा गोल गरे । सशक्त प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका टेभेज खेलको ६९ मिनेटमा मैदान छाडे। उनी म्यान अफ दी म्याच घोषित भए ।
ग्रीससँगको खेल नखेलेका ९ नं.जर्सीका फरवार्ड गोन्जालो हिगुइनले खेलको ३३ औं मिनेटमा गोल अर्जेन्टिनाको पक्षमा दोस्रो गोल गरे । यो विश्वकपमा उनले चार गोल गरिसके । यो विश्वकपमा चार गोल गर्ने कोही पनि छैनन्। बढी गोल गर्नेले गोल्डेन बुट पाउनेछन्। यसअघि दक्षिण कोरियासँगको खेलमा उनले तीन गोल गरेका थिए ।
विश्वकपबाट बाहिरिएको मेक्सिकोले पनि अर्जेन्टिनामाथि केही शसक्त प्रहार गर्‍यो । खेलको ७१ मिनेटमा जावेद हेर्नान्डिजले गरेको प्रहार गोलमा परिणत भयो। अन्ततःखेल ३-१ ले सकियो ।
Filed under: SPORTS Tagged: | विश्वकप फुटबल world cup	« उरुग्वे र घाना क्वाटर फाइनलमा/आसामो ज्ञान भए हिरो खेलाडी/अमेरिका हिस्सै सेमिफाइनलको लागि नेदरल्याण्ड्स र ब्राजिल भिड्ने/चिली र स्लोभाकिया बाहिरिए »